Index Inokurumidza Chip: Inokurumidza, Zvirinani EMV Chiitiko
China, May 24, 2018 China, May 24, 2018 Douglas Karr
Masikati ano, ndashanyira mwanasikana wangu kuhofisi yake (ndinotonhorera sei Baba?). Ndakamira pachitoro chiri mhiri kwemugwagwa, Iyo Nyowani Musika ndokutora maruva akanaka kurongedzwa kwedhesiki rake uye kumwe kubata kune vashandi vepo. Pandakatarisa kunze, ndakapepereswa nemhepo… ndakaisa EMV kiredhiti kadhi rangu uye raishanda rinenge pakarepo. Yaive yekukurumidza kupfuura kwese kwandakamboona che Checkout ichishanda ine chip-inogoneswa
Nei Uchifanira Kukwiridzira Kadhi Rako Swipe kuEMV
Muvhuro, June 15, 2015 Muvhuro, June 15, 2015 Douglas Karr
Ndichiri ku IRCE, ndakafanira kugara pasi neIntuit's SVP yePayments uye Commerce Solutions, Eric Dunn. Kwakave kutarisa-kuvhura maziso mukutenderera kweIntuit mumusika wekutengesa uye ecommerce. Muchokwadi, vanhu vazhinji havazvizive asi mari yakawanda inoyerera kuburikidza neIntuit pane PayPal kana zvasvika pakutengesa pamhepo (kana iwe uchibatanidza yavo yekubhadhara masevhisi). Intuit iri kuenderera mberi nekuedza kuve yekupedzisira-kumagumo mhinduro kune chero ecommerce kana rejista bhizinesi uko
Smartcards Kuteedzera Kunze Kwemakore Anotevera mashoma
Chipiri, April 15, 2014 Muvhuro, April 14, 2014 Douglas Karr
Wow… kana iwe uchifunga nezvese dzakatsaurwa uye dzinoenderana nehardware yetsika yemagineti mitsetse makadhi echikwereti, ndiyo toni yemidziyo uye mari kunze uko kutsiva. Mumakore mashoma anotevera, zvakadaro, ndizvo chaizvo zvichaitika! Makadhi echikwereti echinyakare ari munzira yekubuda. Zvakatora kubiridzirwa kwemamirioni makumi manomwe Target kadhi rechikwereti mukati megore ra70 rezororo kukurudzira Congress kuti vasiye makadhi asina kugadzikana -makadhi emitsara anoshandiswa